ကိစ္စပြီးတိုင်း နာကျင်နေတတ်လား? | သိလိုရာမေး
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် ကိစ္စပြီးတိုင်း နာကျင်နေတတ်လား?
ယေဘူယျအနေနဲ့ လိင်ကိစ္စအတွေ့အကြုံကို စတင်လုပ်ဖူးခါစ အချိန်တွေမှာ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ နာကျင်မှုခံစားရတာက ပြဿနာမရှိပေမယ့် နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုလို လိင်ဆက်ဆံပြီးတိုင်း ခံစားရရင်တော့ တခြားသော ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြောင့်လို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာ လိင်ဆက်ဆံပြီးချိန် နာကျင်မှုခံစားရတာဟာ အောက်ပါအကြောင်းအရင်းတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မျိုးပွားအင်္ဂါတွင် STIs ကဲ့သို့သော လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်း ( ကလာမိုင်းဒီးယား၊ ဂနို နဲ့ လိင်အင်္ဂါ ရေယုန် အစရှိသည်ဖြင့် )
မီးယပ်သွေးဆုံးကိုင် ဝေဒနာများ ခံစားနေရခြင်း
မိန်းမကိုယ်နံရံ ကြွက်သားများ တင်းကျပ်လွန်းသောကြောင့် လိင်ဆက်ဆံရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း
အမျိုးသားရဲ့ သုက်ရည်နဲ့ ဓာတ်မတည့်သူဖြစ်ခြင်း နှင့် ရော်ဘာကွန်ဒုံးအစရှိသည့် လိင်ဆက်ဆံရာတွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်း နဲ့
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုဖို့ စိတ်မပါသောကြောင့် လိင်အင်္ဂါ စိုစွတ်မှုမရှိခြင်း စတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ဆစ်ဖလစ်၊ ကာလသားရောဂါ အစရှိသည့် ဝေဒနာများ ခံစားနေရခြင်း
မိမိနှင့်မကိုက်ညီသော ကွန်ဒုံး အစရှိသော ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမိခြင်းကြောင့်လဲ လိင်ဆက်ဆံပြီးချိန်မှာ နာကျင်မှုတွေ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ဒီလို အတူနေပြီးချိန်မှာ နာကျင်မှုခံစားနေရတယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်သင့်လဲ?
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ မိမိမှာ မိန်းမကိုယ်မှာ ချောဆီ အလုံအလောက်မထွက်တဲ့အတွက် ဒီလိုနာကျင်မှုဖြစ်ရတယ်ဆိုရင် ဆက်ဆံဖော်အမျိုးသားကို ရေဓာတ်အခြေခံ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ချောဆီသုံးဖို့ တိုက်တွန်းသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိ က ကွန်ဒုံးအစရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့ လက်တွဲဖော်အမျိုးသားကို ကွန်ဒုံးအမှတ်တံဆိပ်‌ ပြောင်းသုံးခိုင်းတာမျိုးတွေ ပြုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းသင့်ပါတယ်။
တခါတလေမှာ ဒီလိုနာကျင်မှုခံစားရတာက လိင်ဆက်ဆံဖို့ စိတ်မပါတဲ့ အခါတွေမှာလဲ အဖြစ်များလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလို အတူနေဖို့ စိတ်မပါဘူးဆိုရင်တော့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး (သို့မဟုတ်) မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး အထူးကုဆီမှာ သွားရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်တွေမှာ ဆရာဝန်ဆီ သွားရောက်ပြသသင့်လဲ?
သင့်အနေနဲ့ မိမိ လိင်အင်္ဂါတွေမှာ မူမမှန်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြလာမယ်၊ အတူနေပြီးချိန်မှာ မျိုးပွားအင်္ဂါတွေကနေ သွေးဆင်းမယ်၊ မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်လာပြီဆိုရင် နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ ဆေးခန်းကို အမြန်ဆုံး သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။